Uyihlela njani iProfayile ye-LinkedIn? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Uyilungisa njani iprofayile ye-LinkedIn?
Meyi 12, 2021 0 IiCententarios 314
Namhlanje i-LinkedIn iye yasetyenziswa ngokubanzi kwinethiwekhi yoluntu, ke ukuba unayo iakhawunti kuyo, kubalulekile ukuba uyazi uhlela njani iprofayili Ngokufanayo. Ngenxa yeso sizathu, kweli nqaku uza kufunda ukuba yeyiphi idatha yeprofayile enokutshintshwa.
Kananjalo uya kuyazi amanyathelo ekufuneka uwalandele hlela iprofayili kwiphepha elisemthethweni le-LinkedIn nakwisicelo esiselfowuni.
Yeyiphi idatha enokuhlelwa kwi-LinkedIn
Ukuba neprofayile elungileyo xa usenza iakhawunti kwi-LinkedIn yinto ebaluleke kakhulu, kuba kunjalo umsebenzi onokuwufumana uya kuxhomekeka. Ngesi sizathu, kubalulekile ukuqaqambisa ukuba, ukuba kuyafuneka, le datha yeakhawunti ilandelayo inokulungiswa:
Idatha yobuqu, enje nge igama, igama lokugqibela, iminyaka, idilesi kunye nomhla wokuzalwa.
Iprofayili okanye ifoto yokugubungela.
Ukuthathela ingqalelo oku, kwezi ngongoma zilandelayo uya kufunda ukwenza ifayile ye- uhlengahlengiso oluyimfuneko kwiprofayile yakho ye-LinkedIn.
Amanyathelo okuhlela iprofayile ye-LinkedIn kwiwebhusayithi
Ukuba emva kokuba ulayishe ulwazi lweprofayile yakho Qaphela ukuba kufuneka uyiguqule, ungakhathazeki, kuba uhlelo lwayo lulula kakhulu. Kule meko kuya kufuneka kuphela ukulandela la manyathelo alandelayo:
Ngena kuso nasiphi na isikhangeli esikwi I-LinkedIn iphepha elisemthethweni.
Xa ukwikhasi lakho lasekhaya, cinezela ukhetho "Sayina ungene" ebekwe kwinxalenye ephezulu yesikrini.
Kuya kuvulwa iphepha elitsha kwaye kufuneka ubonise i-imeyile okanye inombolo yefowuni kunye negama lokugqitha kwiibhokisi ezibonisiweyo.
Emva koko kufuneka umakishe "Ukungena".
Xa uku-akhawunti yakho, cofa indawo ethi "Ndi" phezulu kwiscreen.
Iinketho ezininzi ziya kuvela kwaye kufuneka uphawule le ithi "Jonga iprofayile".
Elinye iphepha liya kuvula kwaye kufuneka ulikhangele icandelo ofuna ukuliguqula kwaye xa ulifumene uyakucofa ku "Hlela".
Emva koko wenza utshintsho olufunayo.
Okokugqibela, cofa ku "Gcina" kwaye ugqibile.
Amanyathelo okuhlela iprofayile ye-LinkedIn ukusuka kwisicelo esiselfowuni
Yenza i ukuhlela iprofayile yeakhawunti ye-LinkedIn kwi-mobile app Ilula njengoko kubonisiwe kwindawo yangaphambili. Ngapha koko, kunokuthiwa iyakhawuleza, kuba inokwenziwa kwifowuni nokuba uphi. Kule meko, amanyathelo ekufuneka elandelwe ukufezekisa oku ngala alandelayo:
Vula isicelo se-LinkedIn.
Emva koko faka igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha kwiibhokisi ezihambelanayo.
Emva koko ucofe ku "Enter".
Nje ukuba ungene ngaphakathi kwiakhawunti kufuneka cofa umfanekiso weprofayile.
Izinketho ezininzi ziya kuvela kwaye uya kucofa lo uthi "Jonga iprofayile."
Emva kokuba ukwinkangeleko yakho, khangela indawo ofuna ukuyiguqula kwaye ukhethe u "Hlela".
Emva kwexesha, yenza uhlengahlengiso olufanelekileyo.
La manyathelo ayakufana nokuba unayo isixhobo esinenkqubo yokusebenza ye-iOS okanye ye-Android.
1 Yeyiphi idatha enokuhlelwa kwi-LinkedIn
2 Amanyathelo okuhlela iprofayile ye-LinkedIn kwiwebhusayithi
3 Amanyathelo okuhlela iprofayile ye-LinkedIn ukusuka kwisicelo esiselfowuni
Ungazi njani ukuba umntu undihlukanisile noFacebook?
Ungasusa njani abafowunelwa kwi-LinkedIn?